के पुँजीका लागि मात्रै हो मर्जर ? किन टिक्दैनन् कर्मचारी ! ~ Banking Khabar
पछिल्लो समय ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक मर्ज भएर ग्लोबल आईएमई बैंक बन्यो । प्रभुले ग्राण्ड बैंकलाई मर्ज गर्यो । क्रिष्ट बैंक र प्रभु बैंक एक आपसमा मर्जरमा गए । यसैबीच लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज भए । बैंक अफ एशिया र एनआईसी मर्ज भएर एनआईसी एशिया बन्यो । प्रभु फाइनान्स विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंक बनेको हो ।
आर्थिक न्युज दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।